Qataro Amni oo Muqdisho ka jira Iyo Xukumada Iyo Lamaha Amanka oo Ku Fashilan Helida Qataraha Amaan ee JiraMuqdisho Online - Caasimada Muqdisho. Somalia | Muqdisho Online - Caasimada Muqdisho. Somalia
Home News Qataro Amni oo Muqdisho ka jira Iyo Xukumada Iyo Lamaha Amanka oo...
Qataro Amni oo Muqdisho ka jira Iyo Xukumada Iyo Lamaha Amanka oo Ku Fashilan Helida Qataraha Amaan ee Jira
Waxa inta inta badan istaaga adeegyada iyo dhaqdhaqaaqa ka jira Xarunta Xalane ee Magaalada Muqdisho,waxana inta badan dhacda marka ay istaagan howlaha shaqo ee Xaruntaasi qaraxyo xoogan oo Casimada Dalka ka dhaca.
Sida wararka ay shegayan istaagida dhaqdhaqaaqa Xarunta Xalane aya imaaday ka dib markii lagu wargaliyay Qatar Amni in ay jirto sidaasina ay keentay in la joojiyo dhaqdhaqaaqa xaruntaasi.
Ilo ka mid shaqaalaha Xaruntaasi oo Soomaali ah ayab= ino xaqiijiyay marwalba oo qataro amni loo shego in Magaalada ka dhacaan Qaraxyo ismiidaamin ah.
Laamaha amaanka ee Dalka aya ku fashilan sugida amaanka Caasimada iyado ay sii kordhayaan Dilalka ka dhaca Magaalada Muqdisho,Xili shaqsiyaadka Dilalka geysta ay ka baxsadaan goobta ay dilka ka geystaan.
Wasiirka amniga iyo Xukuumada Xasan Cali Kheyre aya fashil ku ah sugida amaanka iyado xogaga ay helaan Safaaradaha Shisheye ee fadhiisinka ku leh Xarunta Xalane aysan ku war galin Dowlada Iyo Xukuumada kheyre.
Previous articleMaxay Tahay Sababta Ka Danbeysa In Soomaalida iyo Amisom lo Diido In ay Gudaha u Galaan Xarunta Xalane ee Muqdisho
Next articleGaas VS Khere: Xiisada cusub oo ka dhax bilabatay qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo Xukuumada
RW Xassan Kheyre: Fursad iyo qasaaro siyaasadeed kee buu dooran doonaa? MW Farmaajo maxaa u talo ah? Falaqayn iyo talo soo jeedin